Home Wararka (Deg Deg) Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo Muqdisho lagu dilay
(Deg Deg) Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo Muqdisho lagu dilay
Koox hubeysan ayaa caawa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ku dishay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Ibraahim Macow.
Marxuumka ayaa lagu toogtay banaanka ee Masjid uu ku soo dukaday salaadii cishaha, sida ay dad goobjogogayaal ah u sheegeen MOL.
Cabdiraxmaan Ibraahim Macow oo mudo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan u sharaxnaa mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee laga soo doorto gobolka Hiiraan.
Marxuumka ayaa la soo shaqeeyey Maxkamadihii Islaamka ee mar ka talinayay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sidoo kale guddoomiye ayuu mar ka soo noqday gobolka Hiiraan.
Marxuumka Cabdiraxmaan oo caawa la dilay ayaa la sheegay in dhowaan uu Muqdisho ku qabtay munaasabad uu ku shaaciyay inuu yahay musharax u tartami doona mid ka mid ah kursta baarlamaanka faderaalka ee laga soo doorto gobolka Hiiraan.
Previous articleIkraan Tahliil Hooyadeed oo digniin adag u dirtay Fahad tegistiisa Beledwyne
Next article[XOG] Loolanka loogu jiro Kursiga HOP064 oo galey weji cusub & Musharax looga yeeray Maxkamad
Shirka Teendhada Afisyooni oo Maalinkii Labaad galay ?
Ciidamo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo qarax lagula eegtay duleedka...